Traffic on the street? How about wearing this Iron Man suit to work? – SUNNY Tech News
Posted byDaxDo 23rd Oct 2020 28th Oct 2020 Posted inUncategorized
အရေးတကြီးသွားစရာရှိလို့ ကားပိတ်နေရင် စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းရောက်အောင် သွားလို့ရမယ့် “Iron Man Suit“.
လမ်းပေါ်မှာကားတွေပိတ်နေတဲ့ပြဿနာကတော့ ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘဝမှာ ကြုံတွေ့နေကျ အခြေအနေတစ်ခုဆိုလဲ မမှားပါဘူး။ သာမန်အချိန်မှာတော့ ဘာမှမဟုတ်ပေမယ့် တကယ်အရေး ကြီးကိစွရှိတဲ့ အချိန်ဆိုရင်တော့ တော်တော်လေးအာရုံနောက်စရာပါ။ အခုဆိုရင် အဲ့လိုပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ Jet Suit ကို Lake District မှာစတင်အသုံးပြုပြီး လူ့အသက်ပေါင်းများစွာကို ကယ်တင်ပေးနိုင်နေပါပြီ။
ဒီ Jet Suit ကိုတီထွင်ရတဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ လူနာတွေကို အချိန်မှီကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက် အရေးပေါ်ဆေးရုံလုပ်သားတွေ အသုံးပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ Great North Air Ambulance Service ကနေ စမ်းသပ် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဒီ Jet Suit ဟာ အရေးပေါ်လူနာတွေဆီကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်းပျံသန်းပြီး ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ GNAAS နဲ့ Gravity Industries တို့ရဲ့ တစ်နှစ်အကြာ ဆွေးနွေးမှုအပြီးမှာ ပထမဆုံး စမ်းသပ်ပျံသန်းမှုကို England အနောက်မြောက်ပိုင်း Cumbria မှာရှိတဲ့ Lake District မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
GNAAS ရဲ့ စစ်ဆင်ရေးဒါရိုက်တာ Andy Mawson က ဒီအကြံကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး လက်တွေ့မြင်ရတဲ့အချိန်မှာ တကယ်ကို အံ့အားသင့်စေခဲ့တာပါ။ “အရေးပေါ်ဆေးဝန်ထမ်းတစ်ယောက်က မိနစ် (၃၀) လမ်းလျှောက်သွားတာထက် စက္ကန့် (90)အတွင်း ပျံသန်းသွားနိုင်ဖို့ အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒီစမ်းသပ်ပျံသန်းမှုကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သူကတော့ Gravity Industries ရဲ့ Founder, Richard Browning ဖြစ်ပြီး “ ဒီဝတ်စုံရဲ့ လက်မောင်းတစ်ဖက်စီပေါ်မှာ အသေးစားအင်ဂျင်နှစ်ခုစီရှိပြီး နောက်ကျောဘက်မှာ တစ်ခုပါရှိပါတယ်။ နောက်ကျောဘက်ကတစ်ခုကို လက်နဲ့လှုပ်ရှားပေးရုံနဲ့ အရှိန်ကိုထိန်းညှိလို့ရနိုင်ပြီး၊ အဓိကအားသာချက်ကတော့ သူ့ရဲ့ အမြန်နှုန်းပါပဲ။ ”လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်း ဒီလို Jet Suit တွေသာဈေးကွက်ပေါ်ရောက်လာပြီး တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြု လာနိုင်မယ် ဆိုရင်တော့ အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေနဲ့ တခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကိစ္စတွေအတွက် အနာဂတ်မှာ တော်တော်လေးအထောက်အကူဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။